Tanambe Ambatondrazaka : Voavaha ny olan’ny famatsian-drano -
AccueilRaharaham-pirenenaTanambe Ambatondrazaka : Voavaha ny olan’ny famatsian-drano
Noporofoin’ny filohampirenena tany Tanambe Ambatondrazaka fa mihaino ny hetahetan’ny vahoaka izy. Hetahetan’ireto vahoaka any Ambatondrazaka ireto ny hahazoana fotodrafitrasa momba ny rano sy ho an’ny fambolem-bary ka dia notanterahany izany. Paompy miisa 41 no natolotra ho an’io kaominina io. Mponina miisa 22 000 ao anatin’ny fokontany 5 mandrafitra an’io Kaomina io no misitraka ny tombontsoa vokatr’izany. Ny Filohampirenena izy tenany mihitsy no tonga tany amin’ity ambanivohitra ity ary niara-nitakosina tamin’ireo vahoaka. “ Mahatsapa ny filan’ireo vahoaka aho”, hoy ny FIloha.
Nojeren’ny fitondrana manokana koa ny momba ny lakan-drano izay miantoka ny fambolem-bary amin’iny faritra iny. Nisy ny fiaraha-miasan’ny fanjakana tamin’ny banky iraisampirenena ny amin’ny fanatsarana ny lakan-dranon’Anony, amin’iny faritra iny. Manodidina ny 830 tapitrisa Ariary ny tetibidin’ny fanatsarana izany lakan-drano izany, ka ankoatra an’io dia tafiditra ao anatiny ihany koa ny fametrahana tetezana maromaro. Eo ihany koa ny fanatsarana ny lalana manamorona izany. Vokatr’izay, raha toa ka 2 000 ha no tanimbary nahazo famatsian-drano ara-dalàna teo aloha, ankehitriny kosa dia mahatratra hatramin’ny 5 021 ha izany. Tokantrano manodidina ny 1 041 moa no misitraka tombontsoa amin’izany.
Nanararaotra namboraka ny hetahetany ny mponina ao Tanambe nandritra ny fandalovan’ny filoham-pirenena teny an-toerana. Voaresaka nandritra ny dinidinika nifanaovana ny fanamboarana ny lalana RN3 izay mampitohy an’I Vodihala mandalo an’I Tanambe. Eo ihany koa ny olana eo amin’ny tsy fandriam-pahalemana. Namaly izany avy hatrany ny Filoha ka nanambara fa ho tapenana ireo lavadavaka amin’iny lalana iny. Mikasika ny lafiny fandriam-pahalemana kosa dia zandary 120 vao avy nahavita fiofanana no alefa hanamafy ny fitandroana ny filaminana any amin’iny faritra Alaotra Mangoro iny. Ankoatra izay dia nisy ny fitsinjovana ny lafiny fahasalamam-bahoaka ka nanolotra fitaovana ho an’ny CSB II tao Tanambe ny filoham-pirenena. Ny lafin’ny serasera ihany koa dia nitondran’ny fitondram-panjakana vahaolana, ka nampanantena ny Filoha fa hisy ny fitaovana hampandehanana ny fahitalavi-panjakana, entina hanatsarana ny fampahalalam-baovao ho an’ny mponina. Nampatsiahy kosa anefa ny Filoha fa andraikitry ny rehetra ny mikajy ny fananana iombonana mba hampateza azy.